MUUQAAL:-R/wasaarihii hore ee Saacid Shirdoon oo Khudbad qiima leh ka jeediyay munaasabada Kowda Luuliyo oo ka dhacday Ingiriiska | Saadaal Media
MUUQAAL:-R/wasaarihii hore ee Saacid Shirdoon oo Khudbad qiima leh ka jeediyay munaasabada Kowda Luuliyo oo ka dhacday Ingiriiska
Ra’isulwasaarihii hore ee Dawladda Fedaraalka ah ee Soomaaliya Mudane Dr. Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa munaasabadda kowda Luuliyo ee sanadkaan 2019 uga qayb galay magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska.
Waxaa Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) uu munaasabadda ka jeediyay Khudbad kooban oo qiimo iyo qiiraba leh, taasoo uu uga hadlay arima badan oo ku saabsan taariikhda halkankii gobnanimadoonka iyo israaca labada gobal ee soomaaliyeed ee waqooyi iyo Koonfur.
Waxaa mudane Shirdoon uga horayntii uu u mahad-celiyay, isla markaana u hambalyeeyay musuuliyiin hore ee Dawladda Fedaraalka ah oo goobjoog ahaa xafladdaas, kuwaasoo uu ka mid yahay Madaxweynihii hore Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Axmed iyo Jaaliyadda reer Bristol ee soo qaban-qaabisay iyo dhamaan dadkii kasoo qayb galay munaasabadda 1 Luuliyo ee ka dhacday magaalada Bristol.
Khudbad kooban oo uu Mudane Shirdoon halkaas ka jeediyay ayuu si fiican ugu faahfaahiyay, marxaladihii uu gumaysigu soo mariyay dalka iyo dadka soomaaliyeed, kaasoo sheegay in labadii gobal ee Koonfur iyo Waqooyi, markii ay ka baxeen gacanta gumaysiga, ay si shuruud la’aan ah ku midoobeen, taasoo ahayd arrin aan horey uga dhicin taariikhda dunida, isla markaana ahayd mid lagu faani kara oo ka turjumaysa waddinyadda dadka soomaaliyeed.
Ma ahayn wax qoraal lagu wada xusi karo khudbaddii uu Mudane Cabdi Shirdoon halkaas ka jeediyay, hase yeeshee ugu dambayntii waxaa u xusay in dadka soomaaliyeed ay leeyihiin taariikh fog oo ku saabsan halkankii ay usoo mareen xornimada macaanka badan ee ay maanta harsanayaan, taasoo mudan, in la is xasuusiyo, waxna laga barto, lugana faano, isla markaana jiilasha soo korayo loo sheego ama la baro.
HOOS KA DAAWO KHUDBADDII SHIRDOON OO DHAMAYSTIRAN